सबै भन्दा बुद्धिमान हुन्छन् यी ५ राशि, बेवकूफ बनाउन लगभग असम्भव ! | latestnepali.com
flash newsधर्म सस्कृतिफिचरराशिफल
सबै भन्दा बुद्धिमान हुन्छन् यी ५ राशि, बेवकूफ बनाउन लगभग असम्भव !
ज्योतिष शास्त्र अनुसार व्यक्ति जन्मदाको समयमा ग्रह-नक्षत्रको गोचरले सम्बन्धित व्यक्तिको जीवनमा ठुलो प्रभाव पार्दछ। खासगरी उसको जन्म राशिसँग सम्बन्धित ग्रहले उसको जीवनको दशा-दिशा निर्धारित गर्दछ। ग्रहहरुका प्रभावले नै ऊसँग सम्बन्धित राशिका जातकका स्वभाव, व्यवहार र गुणहरुका निर्धारण हुन्छ, यस्तोमा जन्म राशिबाट सजिलै मानिसहरुका गुण-दोष पत्ता लगाउन सकिन्छ। आज हामी यसै आधारमा सबै भन्दा बुद्धिमान राशिको बारेमा बताउन गईरहेका छौं।
सिंह राशिका जातक पनि चतुर्‍याईको मामिलामा कम हुँदैनन्। साहसको साथ उनीहरुमा निर्णय लिने क्षमता गज्जबको हुन्छ। उनीहरुमा सिंह जस्तो चपलता र बहादुरी त हुने भई नै हाल्यो, साथै उनीहरुसँग आस-पासका चिजहरुको अवलोकन गर्ने राम्रो क्षमता हुन्छ।
‘सपनी मै आउनु’ लिएर गायक सुरेन गौतम सार्वजनिक [भिडियो ]